I-blogger enkulu ithatha umhlala-phantsi-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ibhulogi enkulu ithatha umhlalaphantsi
Iindaba bekungafanele ukuba uthunyelwe Ngomhla woku-1 ku-Epreli, njengoko nabani na ebenokuthi akholelwe ukuba udlala nosuku lwesidenge, ilingane ne-Anglo-Saxon-style ka-Epreli Fools 'Day ... kwaye kukho abo bancomayo kwezo zinto zigqithileyo.
Ukwazi ukuba akuyiyo intlekisa.
Ndithetha ukuba uPete Kesley, obhale kwenye yeebhloko zaseburhulumenteni ze-AutoDesk: "Ukungcola".
Isizathu sokuthatha umhlala-phantsi kukuba uye wahamba nenkqubo ende ye-chemotherapy emva kokufunyanwa komhlaza. Into elungileyo ukuba ihambe kakuhle kodwa iqinisekisa ukuba uyakusebenza kwenye indawo ye-AutoDesk, kude nebhlog. Okwangoku ndiyathemba ukugcina ikhonkco kwibhlog yakhe kwi-blogroll yam, kuba ndiyithandile indlela abhale ngayo kwisitayile sakhe sokushumayela ngokuchasene nabasebenzisi be-AutoCAD ... siza kubona ukuba ngubani oyithatha kumxholo we-Civil 3D.
Bangakanani abantu abanokutshintsha, lo mfanekiso ubonakalisa ngaphambili nangasemva; uthi kuzofuneka ahlaziye ipasipoti yakhe kuba abayikholelwa kwisikhululo seenqwelomoya
... ithamsanqa kuye.